Cilmiga isgaarsiinta Ghostwriter Waxaan qoraayaal waraaqo adeeg ah
, 07: 26
Qorayaashayagu waxay leeyihiin aqoonta lagama maarmaanka u ah cilmiga isgaarsiinta
Waxaad ku baran kartaa cilmiga isgaarsiinta jaamacado badan oo Jarmal ah. Mawduucan waxaa badanaa loo qoondeeyaa tiro-koob, yacni waxaad u baahan tahay mid Celceliska dhibcaha dhibcaha ee u dhexeeya 1,4 iyo 2,8. Koorsada ayaa ah isdhaafsiga macluumaadka dadka iyo isgaarsiinta iyadoo la adeegsanayo warbaahinta kaladuwan. Warbaahintu waa dhinac dhinac warbaahinta daabacaadda dhaqameed iyo sidoo kale raadiyaha, telefishanka iyo warshadaha PR. Muddo sanado ah hada, isgaarsiinta ayaa si isa soo taraysa uga socota internetka, ha ahaato barnaamijyada bulshada ee leh fursadahooda kaladuwan ama bogagga macluumaadka ee dhammaan mawduucyada xiisaha u leh. Ka dib markaad qalin jabiso, waxaad khabiir ku noqon doontaa xiriirka iyo isgaarsiinta kala duwan.
Koorsada waxaa ku jira aasaaska isgaarsiinta sida B.
Taariikhda wada xiriirka
Maaddooyinka kale waxay ka shaqeeyaan maadooyinka maareynta warbaahinta, sharciga saxaafadda iyo dhaqaalaha warbaahinta, iyo isgaarsiinta dhaqamada kala duwan. Darajada sayniska isgaarsiinta waa mid shahaadada koowaad ee bachelorka (kadib qiyaastii. 6 semesters) ama shahaadada mastarka kadib 4 ilaa 5 semestar kale. Caqabadahaani maahan dhibaatooyinka kaliya ee lala soo kulmay intii aad wax baraneysay. Waa inaad ku aflaxdaa maadooyinka adag oo aad si dhib yar u qaadan kartaa nasasho. Qorayaashayagu waxay ku qoraan khibrad sannado badan ah waxayna si joogto ah u abuuraan waraaqo cilmiyeed. Khibraddan lama soo koobi karo dhowr toddobaad oo shaqo culus ah oo mowduuc laga hadlayo. Hadda nala soo xiriir oo dalbo taada Maqalka. Waxaad sidoo kale na siin kartaa mid dib u xusuusasho si loo hagaajiyo Kadib waxaan kuu soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.
Shaqadaada cilmiga ah ee sidaas ah shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad noogu soo qori kartaa qoraalkaaga. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa, adigoon hakad weyn gelin, haddii kale qoraa si dhakhso leh ayuu uga bixi doonaa mowduuca. Adeegsiga adeegyadeenu wuxuu ku siinayaa xorriyad badan. Sidoo kale waa inaad ku tiirsanaataa talooyinka qoraaga cirfiidka tayada qoraalkaaga ee ku saabsan daraasaddaada tacliimeed.
unsere Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Der Bachelor waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan. Markaad qalin jabiso, waxaa jira fursado badan. Tusaale ahaan, waxaad u shaqeyn kartaa sidii shirkad madaxbanaan ama dhisi kartaa ganacsi kuu gaar ah. Waxaad sidoo kale ku biirin kartaa xirfadahaaga shaqaale ahaan shirkad. Adiguba waxaad leedahay kuwa wanaagsan oo sayniska ah Rajada mustaqbal dheeraad ah. Qoraa-yahankeena ghostwriterka ayaa shaqadaada kuu soo gudbin doona.
Markaad qalin jabiso, waxaa kuu furan ikhtiyaarro xirfadeed oo kala duwan. Waxaad ka sameyn kartaa xirfad saynis iyo cilmi baaris. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale shaqo ka heli kartaa warshado kale oo badan, sida:
warbaahinta caadiga ah (raadiyaha, telefishanka, daabacaadda)
La talinta maamulka
Warshadaha la sheegay, dabcan marwalba way wanaagsan tahay inaad haysato shahaadada mastarka. Qorayaasheennu waxay ku faraxsan yihiin inay qoraan shaqadaada cilmiyeed.
Qoraalka qoraalka ee sayniska isgaarsiinta
Xitaa ardayda Cilmiga bulshada iyo Dadnimada adeeggeena aad iyo aad u badan u isticmaal. Amarka Shaqadaadii dhamaysay hada!
Sayniska isgaarsiinta ee warbaahinta cusub
ka Isgaarsiinta internetka ayaa si weyn kor ugu kacay sannadihii la soo dhaafay. Tirada emayllada la diro ayaa si aad ah kor ugu kacday marka loo eego sanadihii hore. Daabacaadyadii ugu dambeeyay ee ka soo baxay jaamacadaha iyo Xafiiska tirakoobka ee federaalka ayaa muujinaya tan.Waxaa baahi weyn loo qabaa cilmi baaris ku saabsan aaggan.
Sayniska isgaarsiinta ee nolosha xirfadeed
Shirkado badan oo waawayn ayaa hada u qaybinaya telefanada gacanta shaqaale kasta. Fikradda ka dambeysa tan waa in shaqada loo fududeeyo. Kuwo badan waxay ogaadaan oo keliya dib-u-eegis inay taasi kordhinayso culeyska shaqada. Sababtoo ah emayllada ayaa badanaa la hubiyaa saacadaha shaqada ka baxsan. Dhacdadan wali lama baarin oo waxaa looga shaqeyn karaa shaqadaada cilmiga ah.
Aagga cilmiga isgaarsiinta ee shirkadaha ganacsiga
Shirkaduhu waxay aad ugu tiirsan yihiin aqoonyahannada isgaarsiinta iyo barashada warbaahinta. Aqoonyahannada ka soo baxa jaamacadda ama kuleejka ayaa fikrado cusub u keena shirkadda. Si kastaba ha noqotee, dareenka ayaa had iyo jeer la siiyaa celceliska dhibcaha darajada. Qoraal aad u wanaagsan ayaa sidoo kale la soo dhaweynayaa.
.Hubinta tayada ee cilmiga isgaarsiinta
MRS JENNIFER DÖRFLER